Madaxda Barcelona Iyo Real Madrid Oo Ka Soo Horjeestay In Finalka Supercopa Lagu Qabto China - jornalizem
Madaxda Barcelona Iyo Real Madrid Oo Ka Soo Horjeestay In Finalka Supercopa Lagu Qabto China
Sida ay qortay jariirada AS, madaxweynayaasha Real Madrid iyo Barcelona ayaa ka soo horjeestay fekerka ah in Supercopa de Espana lagu ciyaaro China.
Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez iyo dhigiisa Barcelona Sandro Rosell ayaa ka qeybgalay kulan shalayto oo isniin aheyd oo ay isagu yeereen xiriirka kubada cagta Spain, iyadoo ay sidoo kale ka qeybgaleen wakiilada kooxaha kale ee La Liga.
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta Spain Villar ayaa isku dayayay inuu u sharaxo sababaha ka danbeeya inay ogolaadaan heshiis ay u soo bandhigtay shirkad Chinese ah oo ku aadan in shan ka mid ah 7 final oo Supercopa lagu ciyaaro China.
Si kastaba, Perez iyo Rosell ayaa ka soo horjeestay qorshahaas, iyagoo ku dooday in sababo Isboorti, dhaqaale iyo bulshonimo darteed aysan u ogoleyn in koobka lagu qabto Asia.
Waxa ay ku doodeen in taageerayaasha labada kooxood ee dalka gudahiisa ee muddo badan daacada u ahaa inay ka xumaan doonaan in lagu qabto final ay ka qeybgalayaan midkood labada kooxood meel aysan gaarin karin ama u safri karin.
Sidoo kale lacagaha ay doonayaan in xiriirka ay siiyaan kooxaha finalka isagu yimaada ee dhanka tikidhada ayaa ah mid aad uga yar lacagtii ay ku heli lahaayeen hadii ay Spain ku ciyaaraan.
Sida Barcelona ay sheegtay finalkii Supercopa ee sannadkan waxa ay tikidhada kaliya ku heleen 8 milyan euro, halka xiriirka kubada cagta Spain uu soo bandhigay in hadii finalka lagu qabto China islamarkaana ay Real iyo Barca isagu yimaadaan inay kooxdiiba siin doonaan 4 milyan euro, hadii koox ka mid ah ama kooxo kale ay finalka isagu yimaadaan ay bixin doonaan kaliya 3 milyan euro.
Kooxaha kale ee La Liga ayaa iyaga taageersan heshiiskaan inkastoo ay ka warqabaan in Barca iyo Real ay cabaqad ku yihiin.